Xog Dheeraad – Afထgy Platform
Pagekaaani waxaan kugu soo kulminay su'alaha badana uu ardayga is waydiin karo marku kusoo biirayo shabakadda Afoogy iyo sidoo kale waxa ku dhigaynay meelaha uu shabakdda afoogy kala soo xariiri karo.
Waa bar si online ah wax loogu barto oo ay ku diyaar yihiin macalimiin aqoon dheeraad ah u leh waxay ku barayaan. Sidoo kale technology-ada an wax ku barno ardaydeena waa mid caalami ah oo ay adeegsadan kuwa ka mid ah jaamacadaha ugu waawayn caalamka sida University of Florida (UF) iyo University of Michigan (UoM)
Sidee ugu soo biira?
Kusoo biiritaanka afoogy.com waa mid aad u fudud kaliya adiga oo maraya 3 talaabo.
Marka hore xubin ka noqo oo samayso Username
Kadib iska dhiib lacagta khidmada ee afoogy oo ay ugu yartahay $5/bishii ama 10$/3dii bil mar aa dhibaysid, si course ka ad rabto u barato. Hada fasal rabtane waa $7/bishii ama 14/3dii bil mar aa dhiibe.
Kadib dooro fasalka ama koorsada rabtid. Sidaas ku bilow waxbarashadaada adiga oo raacaya tilmaamaha.
Habkee ayaan u bixin kara khidmada AFOOGY?
Way kala duwantahay hababka afoogy.com lacagta loo bixiyo oo isagu jira kuwa hadda la heli karo iyo kuwa an so kordhin doono:
Hadaa joogtid dibadda waxa ku bixin kartaa lacagta PayPal, Master Card iyo adeegyada la mid ah.
Hada joogtid gudaha waxa ku bixin karta Zaad, EVC+, eDahab iyo Sahal.
Sidee wax loogu bartaa AFOOGY?
Habka casharada loogu barto afoogy.com waa hab loo yaqaano “Self-Paced” oo la micna ah qofka ardayga inu doorto maadada u doonayo inu barto kadibna asiga dagsanayo waqtiga u baranayo lana xiriiri karo ardaydeena kale ee baranaya maadada si ay u caawiyaan.
Side lo diyaariyay casharada AFOOGY?
Casharada ka baxa bartan waxa ka dhex heli kartaa webka gudihiisa gaar ahaan classka ama fasalka ad dooratay. Waxayna u habaysanyihiin qaab u fudeedinaya ardayga si wanagaasan inu ula socodo casharada waxay ka koobanyihiin.
Shaqooyin lisku dirayo/Assignment.
Casharada waqtiyada ay soconayaan/qaadanayaan?
Sidan kor ku so xusnay ardaygu isaga ayay ku xirantahay sida u nidaamsan laha waqtiga iyo fursadiisa iyo sida u waqti u hayo. Hase ahaate Afoogy.com waxa u dagsan nidaam guud oo ah ardayga isaga oo an cashar dhamayn inu cashar ku xiga u gudbi karin.
Fasalada bixisaan maxay kala yihiin?
Dhowr fasalo ayaan bixinaa kuwa diyaarintooda an wadno oo goor dhow la so kordhin doonana way jiraan. Kuwa hadda diyaarka ah waxay kala yihiin:
Office Applications Class
Form4 – Secondary School class
Language Class – Gordhow insha Allah
Shahaado ma helaya hada koorso ama fasal dhameeyo?
Haa wad helaysa. Sido kale shahaadooyinkeena waxay u qaybsanyihiin sidan hoose:
Mid ad heli karto hadi ad dhamayso mid kamid ah course-yada qaybta ka ah fasalkaa dooratay.
Hadi ad dhamayso fasalka dhan waxad heli doonta shahaado ay ku qorantahay in ad dhamaysay dhamaan course-yada u ka koobanyahay fasalka.
Shahaadada Lacag miyaa?
May, shahaadada waxay raacsantahay khidmada ad fasalka ku biiritaankiisa ku bixisay
2 thoughts on “Xog Dheeraad”
Amiin hassan jama
asc afoogy group